Itoophiyaan saatalaayitii jalqabaa hawaatti erguun milkoofteetti - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Girum Chala
Itoophiyaan har'a Muddee 20, 2019 Chaayinaa waliin ta'uudhaan saatalaayitii jalqabaa maqaan ishee ETRSS1 jedhamtu hawaaatti erguun milkoofteetti.
Saatelaayitiin Itoophiyaan ergatte kun magaalaa guddoo Chaayinaa Beejingirraa kiiloomeetira 400 fagaattu buufata saatelaayitii irraa dhukaasanirraati.
Saatelaayitiin ergamte kunis hojii qonnaa, albuudaa, eegumsa naannoo, jijjiirama haala qilleensaa, tekinooloojiiwwan odeeffanootiif tajaajile odeeffannoo dhiyeessuu kan dandeessudha jedhameera.
Saatelaayitii kanarraa odeeffannoon kan fudhatamu Buufata To'annoo Saatelaayitiifi Odeeffannoo Fudhachuu Inxooxxootti argamuraati.
Saatelaayitiin Itoophiyaan ergite kun kiiloogiraama 72 ulfaatti.
Saatelaayitiin ergamte kun ergamtee daqiiqaa 30 keessatti bakka lafarraa kiiloomeetira 700 fagaatee argamu hawaa keessatti bakka qabatteetti.
Sirna seetalaayitii furguggisuu biyya keessatti qophaa'eerratti argamanii haasaa taasisaniin ministirri muummee Ittti-aanaa Obbo Dammaqee Mokonnon: "Seenaa boonsaa dalagneerra," jedhan.
Kun milkaa'ina cimaa ta'uu kan himan Obbo Dammaqeen, dorgommiin addunyaan itti jirtu dhimmoota tekinooloojii akka saatelaayitii kana waan ta'eef gara fuula duraattis xiyyeeffannoo addaan ni hojjetama jedhan.
Sirnni saatelaayitii erguu kun Itoophiyaa Biroodkastingiitiin kallattiin tamsa'aa ture.
Saatalaayitiin seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatiif gara hawaatti ergamte kun walta'iinsa injinaroota lammiilee Itoophiyaa kanneen jijjirraa muxannoo warra Chaayinootaa waliin taasisaniin kan ijaarame ta'uun ibsameera.
Ministira muummee duraanii Itoophiyaa Obbo Hailemaariyaa Dassaaleny dabalatee keessummoonni hedduun sirna saatelaayii ergaa kallattiin Masqal Addabaabaayiirraa tamsa'aa tureerratti argamaniiru.
Buufata to'annoo saatalaayitii Inxooxxoo argamu
Kaayyoon saatalaayitii kana maali?
Saatalaayitii erguun maaliif barbaachise gaaffii jedhu ilaalchisee, dhiheenya kana Daarektarri Inistitiyuutii Ispees Saayinsiifi Tekinooloojii Itoophiyaa Dr. Solomoon Balaay BBC'f deebii kennaniiru.
Saatalaayitii jalqabaa kana erguudhaaf dhimmi ijoo barbaachiseef waanta lamadha akka Dr. Solomoon jedhanitti.
Inni tokkoffaan, dandeettiifi ogummaa injinaroonni keenya tekinooloojii fayyadamuu qaban saayintistootaafi dhaabbileen ispeesii biyyoota gara garaa waliin hojjechuun gabbifachuudhaaf.
Saatalaayitiin amma ergamuuf karoorfame kun, qonnaa haalaan karoorsuuf jijjiirama haala qilleensaa, qabeenya bishaanii qorachuudhaaf, ongeerratti akkeekachiisa dursaatiif akkasumas sektara albuudaafi misooma magaalaa keessatti tajaajila barbaadamu argachuudhaaf jedhan Dr. Solomoon.
Odeeffannoon kun biyya keenyaaf barbaachisaadha sababiin isaas, mootummaan Itoophiyaa odeeffannoo saatalaayitii kan warra biraa irraa bitee itti fayyadamaa ture jedhu.
Kanaaf, saatelaayitii kun sharafa biyya alaa nuuf qusatas jedhan daarekteerichi.
"Saatalaayitiin kun danaa Itoophiyaa qarqaraa hanga qarqaraatti kaasuudhaan guyyaa afur keessatti kan addunyaa ammoo guyyoota 50 keessatti nuuf ergiti, odeeffannoo barbaannu waljijjiiruu ni dandeenyaa, kan barbaadu yoo jiraate ni gurgurras," jedhu Dr. Solomoon.
Saatelaayitiin Itoophiyaan ar'a ergite kun Afirkaa keessatti biyya 11ffaa yommuu ishee taasisu, saatelaayitoota 41ffaa ardii Afirkaarraa ergamtedha.
Baasiin saatelaayitiin Itoophiyaa kun gaafate dolaara miliyoona 10 yoo ta'u kana keessaa miliyoonni ja'a mootummaa Chaayinaarraa kan argamedha.
Dolaarri miliyoona lama ammoo Itoophiyaarraati.